देशको सिमा मिचिएको बेलामा प्रधानमन्त्री गीत लेख्नमा व्यस्त
काठमाडौं – १ मे अर्थात १९ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । रचनाकार तथा गायक शिशिर योगीको फेसबुकमा एकाबिहानै नोटिफिकेसन आयो । सांसद भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित कविता ट्याग गरेकी थिइन् । र, पढेर प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेकी थिइन् । कविताको शीर्षक थियो, ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ ।
सर्जकको दृष्टिबाट योगीलाई कविता राम्रो लाग्यो । तुरुन्तै उनले सांसद न्यौपानेसँग कवितालाई गीत बनाउन आग्रह गरे । र, पहिलो पंक्ति गुनगुनाएर सुनाए पनि । योगीलाई त्यसको केही दिनपछि कवितालाई गीत बनाउने प्रस्ताव आयो । अनि चार दिन लगाएर कवितालाई संगीतको लयमा ढाले ।
रेकर्डिङ भने लकडाउन खुलेपछि मात्र गर्ने तयारीमा छन् । कवितामा प्रधानमन्त्रीको देशभक्ति पोखिएको योगी बताउँछन् । त्यसमा संगीत भरेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अझ ऊर्जाशील बनाएको प्रतिक्रिया दिएको योगी बताउँछन् ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को कवितामा पनि संगीत दिँदै छन् योगीले । उनका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणको चौथो दिन सिसियूमा रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कविता रचना गरेका थिए । अस्पतालमै रहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘यो कवितामा संगीत बन्न सक्छ’ भनेर सोधेको योगी बताउँछन् । फोनबाटै ओलीले योगीलाई कवितावाचन गरेर सुनाएका थिए ।
छानेर नि हैन, हैन जानी जानी
तर जन्मिएँ नेपालमै, म भाग्यमानी
अहा १ कति भाग्यमानी ।
सबैभन्दा ठूलो देश
सेवा गर्न यिनको पाएँकति भाग्यमानी
म त कति भाग्यमानी ?
यस कवितामा प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मभूमिप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्य उल्लेख गरेको योगी बताउँछन् । उनको बुझाइमा आफूलाई परेका दुःख सहेर पनि संकल्पको बाटोेबाट विचलित नहुने भाव यस कवितामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । ‘यस कवितामा पनि संगीत भर्ने काम लगभग सकिएको छ,’ योगी भन्छन्, ‘लकडाउनका कारण स्टुडियो बन्द छन् । सबै स्थिति सामान्य हुनेबित्तिकै रेकर्डिङमा जान्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणलगत्तै र कोरोना भाइरस फैलिन नदिन लकडाउन लागू गरिएयता रचना गरेका दुई कविता गीतका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
मजदुर दिवसमा कविता सार्वजनिक हुँदा सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी पनि नभएका होइनन् । ‘तर, कुनै पनि रचना सिर्जना गर्ने उपयुक्त समय हुन्छ भन्नु मूर्खता मात्र हो,’ योगी भन्छन्, ‘सिर्जनाको कुनै समय र सीमा हुँदैन । स्वतःस्फूर्त फुरेको रचना नै कालजयी हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो रचनाले जनमानसमा केही हदसम्म सकारात्मक भाव पैदा हुने योगीको विश्वास देखिन्छ । भन्छन्, ‘कवितामा प्रधानमन्त्रीको अन्तरहृदय नै प्रस्फुटित भएको छ ।’ यसबीचमा आएका प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपाली माटो, चेतना र खबरदारीका गीत रचना गर्नु योगीको पनि विशेषता हो । हालै योगीले सिमानाको विवादलाई लिएर आफ्नो गीत पनि रिलिज गरेका छन्– ‘हेर सिमाना हाम्रो पराइले सुटुक्क चोरेको’ । भिडियो छायांकन गर्न अहिले सम्भव नभएकाले ‘फोटो फिचर’मा उक्त गीत युट्युबमा अपलोड गरिएको छ ।
यसअघि लिपुलेकको विवाद हुँदा नै योगीले तयार पारेका थिए यो गीत । धीरजनाथ योगीको संगीत रहेको गीतमा शिशिरकै स्वर छ । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा संगीतले शालिन भूमिका वहन गर्ने उनी बताउँछन्।
लकडाउनको समयको एकान्त र एकाग्र वातावरणलाई उनले नयाँ सिर्जनामा लगाएका छन् । मनमा रहेको छटपटी बिर्सेर उनी संगीत सिर्जनामा व्यस्त छन् । लकडाउनयता पाँचैथरीका गीत तयार पारेका छन् उनले । ती गीतमा सरकार र न्यायालयमाथि पनि व्यंग्य गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादमा विकृति, विसंगतिबारे कत्तिको कुरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै सकारात्मक कुरा गर्ने उनी बताउँछन् । ‘राम्रो काम गर्न खोज्दा आफ्नै परिवारबाट पनि बाधा आउँछ, कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ शिशिर जी’ भनेर गुनासो गरेको उनी सम्झिन्छन् । भन्छन्, ‘यो सबै सुन्दा साँच्चै घेराबन्दीमै पो हुनुहुन्छ कि भन्ने आभास हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट